Duqa magaalada Baladwayne oo maanta la doortay. – Radio Daljir
Duqa magaalada Baladwayne oo maanta la doortay.
Baladwayne, May 07 -Golaha deegaanka ee magalaada Baladwayne ayaa maanta u doortay duqa degmada Baladwayne Maxamed Xasan Nuuriye.
Doorashada duqa cusub ee magaalada Baladwayne ayaa waxaa goob jog ka ahaa masuuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan iyo degmada Baladwayne, doorashada ayaa u dhacday hab gacan taag ah.
Dhinaca kale amaanka magaalada Baladwayne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa caadi ku soo laabtay kadib dagaal xalay kadhacay bariga magaalada, kaasi oo dhexmaray ciidamada dowladda Soomaaliya, Itoobiya oo dhinac ah iyo maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-shabaab oo weeraray fariisimaha ciidamada dowladda ay ku leeyihiin duleedka magaalada Baladwayne.
Sheekh Cismaan Bare Maxamed oo ah gudoomiyaha degmada Baladwayne ayaa u sheegay Radio Daljir inay jiraan khasaaro soo gaaray kooxihii weerarka soo qaaday.